ပင်မစာမျက်နှာ / PWHT စက် / Induction Heating Shrink Fitting Shaftts and Bearings
အမျိုးအစား: PWHT စက် Tags: induction သငျ့ကျုံ့, မထိုက်မတန်ရိုးကျုံ့, သငျ့ကျုံ့, လျောက်ပတ်ဝက်ဝံကျုံ့, လျောက်ပတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကျုံ့, လျောက်ပတ်ဝင်ရိုးကျုံ့
အပူကုသမှု PWHT welding မထိုက်မတန်ဝက်ဝံ, ကိုင်ဆောင်သူ, ဂဟေဆော်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ, preheat ကျုံ့ prheating, အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ရှပ်ချုံ့အတွက်အထူးပြု induction အပူ System ကိုထုတ်လုပ်သူများ၏ခေါင်းဆောင်။
ကျုံ့လျောက်ပတ်ဝင်ရိုးနှင့်ဝက်ဝံ, ပိုက်လိုင်းအပူ, Pre-welding အပူနဲ့ post-welding အပူကုသမှုများအတွက် induction အပူစနစ်၏ MYD စီးရီး
6 ချန်နယ်ထိန်းချုပ်မှု 10 ခါးဆစ်အသံဖမ်း Net ကအလေးချိန်: 120kg စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 155-260kg
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ induction ကွိုင် K က Thermocouple R-1006 အပူချိန်မှတ်တမ်းတင်
နည်းလမ်းများသက်သာရာသမားရိုးကျ preheating နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သော induction အပူတိုးတက်လာသောအပူတူညီနေမှုနှင့်အရည်အသွေး, လျှော့ချသံသရာအချိန်နှင့်အောက်ပိုင်းကမြားကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင်မြောက်မြားစွာအားသာချက်များ, ပေးထားပါတယ်။ induction အပူလည်းပါဝါထိရောက်မှုနှင့်ဘက်စုံသုံးသည့်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းပညာများထက်ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း, ရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားသည်။
DSP ထိန်းချုပ်မှုသော induction စနစ်၏အင်္ဂါရပ်များ
•လေအေး - တပ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။
အပူချိန်အသံဖမ်း: အပူကွေးတစ်ခုလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်။ ပုံနှိပ်ပါ
•နူးညံ့သော induction coil: မတူညီသောလုပ်ငန်းခွင်၌လေလွယ်အောင်လွယ်ကူသည်။
•အပူချိန်ထိန်းညှိသူ - အပူဖြစ်စဉ်ကို PWHT လိုအပ်ချက်နှင့်အတူတူထားပါ။
• PLC ထိတွေ့မှုမျက်နှာပြင် - သိသာမြင်သာမှုနှင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း။
• Induction heat power - မြင့်သောအပူချိန်နှင့်အပူစွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း
•လျင်မြန်စွာမြန်မြန်အပူ။ ၁၀ မိနစ်အတွင်း ၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်နိုင်သည်။ အပူချိန်ကိုချွေပါ
•လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာခြင်း - ပုံမှန်အားဖြင့်အပူနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသည့်နည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၅၀% ထက် ပို၍ စုဆောင်းနိုင်သည်
MYD စီးရီးသော induction အပူစနစ်က DSP စနစ်ဖြင့် Air-အေးသော induction အပူပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိက applications များစသည်တို့ကိုပိုက်လိုင်းအပူ, ဂဟေဆော်၏ Pre-အပူ, Post-ဂဟေအပူကုသမှု, စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေး, annealing ဖြစ်ကြ၏
အပူ Coating, သင့်လျော်ချုံ့
ဂဟေဆော် Post-ဂဟေအပူကုသမှု, စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ, Annealing preheating
ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရေနံဓာတု, ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း, အာကာသ, သင်္ဘော, သံမဏိ, ဘွိုင်လာ, ဖိအားရေယာဉ်များ, ဆလင်ဒါ, သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံ, Spatial ဖွဲ့စည်းပုံ, ရထားလမ်းတံတား, လျှပ်စစ်မီး, ရေ, သတ္တုတွင်းဆောက်လုပ်ရေး, မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ, နျူကလီးယားစွမ်းအင်, သတ္တုတွင်း, ပလတ်စတစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အပါအဝင်သော induction အပူကိရိယာများ
1. induction အပူပါဝါ
၂။ Induction Coil (Clamp induction coil) သို့မဟုတ် (Soft induction coil)
4. အပူချိန် controller ကို
5. PLC တို့ထိဖန်သားပြင်
ပရင်တာနှင့်အတူ 6. အပူချိန်အသံဖမ်း
၇။ K အမျိုးအစား thermocouple & connection cable ကို
1. ငွေကျပ်အမျိုးအစား thermocouple
2. Thermocouple ဂဟေဆော်